Miyey Barcelona Wali Ka Quusatay Saxiixa Antoine Griezmann? Wargeyska L'Equipe Ayaa Banaanka Soo Dhigay. | Laacib.net
Miyey Barcelona Wali Ka Quusatay Saxiixa Antoine Griezmann? Wargeyska L’Equipe Ayaa Banaanka Soo Dhigay.
March 17, 2019 Abdirashid Mohamud "SHarDinHO" 0
Loolankii ay Barcelona ugu jirtay saxiixa Antoine Griezmann ayaan u muuqan mid dhamaaday, xilli xiddigaan reer France uu sanadkii hore iska diiday inuu u wareego kooxda ka dhisan Catalonia.
Iyadoo kaliya waqti yar ka hor ay dhimatay rajadii Barcelona ee xiddigaan, ayaana hadda mar kale shaki la galinayaa mustaqbalka xiddigaan ee garoonka Wanda Metrapolitano maadaama kooxdiisa laga reebay koobka Champions League.
Griezmann ayaa hadda ka fakaraya mustaqbalkiisa kooxda magaalada Madrid maadaama tartan weyn laga reebay sida uu qoro wargeyska laga leeyahay faransiiska ee L’Equipe, waana mid ka mid ah wargeysyada ugu dhaw ciyaartoyda kubadda cagta.
Sida lagu qoray wargeyska, Griezmann waxaa lagu jabin karaa heshiiskiisa hadda adduun dhan 200 Malyan oo Yuuro, balse marka la gaaro June wuxuu usoo dhici doonaa 120 Malyan oo Yuuro.
Hoos u dhaca ku imaanayo bilow kadib heshiiska Antoine Griezmann waa mid u fiican Barcelona maadaama ay ka bixi karto, waxaana la xasuustaa inuu xiddigaan film Documentary ah oo lagu magacaabo “The Decision” ku diiday kooxda Balaugrana